मलाई चाहिँ पशुपतिनाथमाथि झन धेरै भरोसा थपिएको छ - Ujyaalo Nepal
By ujyaalo	 On १४ चैत्र २०७६, शुक्रबार ०४:४६ 16
के तपाईंलाई बास्तवमैं पशुपतिनाथ छन् भन्ने लाग्दैन ? यो उच्चस्तरीय समितिमा एउटामात्रै पनि श्वासप्रश्वास या सरूवारोग सम्बन्धी विज्ञलाई राखिएको भए पहिले त रोगको नाम सही लेख्दो हो, दोस्रो जनता त लकडाउनमा बस्ने, सरकारले के गर्ने त भनेर बाटो देखाउँदो हो ।
विश्वभर यस्ता समितिमा डाक्टर र वैज्ञानिक छन् । हामीकहाँ बैठक भत्ता किन डाक्टरलाई दिने भन्ने भयो होला । आखिर डाक्टर र वैज्ञानिक भन्दा कम जान्ने नेपालमा को नै छ र ? स्वास्थ्यमन्त्रालयमा बल्लबल्ल एउटा स्वास्थ्य क्षेत्रका व्यक्ति सचिब हुन्छन् । कम्तिमा गृहसचिबलाई राख्नुको सट्टा स्वास्थ्यसचिबसम्मलाई आमन्त्रित गरेको भए पनि केही ठोस राय आउँदो हो । तर, आफूभन्दा अरू अलि बढ़ी जान्ने भएको मलाई त मन पर्दैन, अरूलाई के परोस् !
फेरि हाम्रो ‘स्तर’मोह पनि अचम्मको छ । ‘टास्क फोर्स’ भनेर अरू देशले काम चलाएका छन्, हाम्रो ‘उच्च स्तरीय समिति’ छ । अमेरिकाले स्तर नतोकेर टास्क फोर्समात्रै भनेकाले डाक्टर र विज्ञहरूलाई टिममा राखेको छ तर हाम्रोमा स्तर तोकिएकोले गर्दा समस्या भयो । निम्न या मध्यमसम्म भएको भए डाक्टरलाई पनि राख्न हुन्थ्यो, कोभिड़-१९ जस्तो ठूलो स्वास्थ्य सङ्कटमा तिनलाई उच्च समितिमैं राख्ने कुरो पनि भएन । ‘हाई लेभल’ कमिटीमा त सदस्य पनि हाई लेभलकै चाहियो । नाथे डाक्टर दश वर्ष जेल बसेको हुँदैन ।
अनि देश युद्धमा रहेको र युद्धमा चेन अफ कमाण्ड हुनुपर्ने सार्वजनिक मन्तव्य दिएर आफूलाई कमाण्डर मान्ने स्वास्थ्यमन्त्रीलाई यो महामारी शुरू भएको तीन महिनासम्म पीपीई भनेको के हो भन्ने पनि थाहा रहेनछ । कति पीपीई उपलब्ध छ भन्ने त टाढ़ाको कुरो भयो । ‘खै कसकसले हो सहयोग गर्छु भनेका छन्, आउँदै होला’ उनको जबाफ हो यो । उनले कुनै पनि जबाफ डेटामा होइन ‘लगभग’ भनेर दिन्छन् । जम्मा दुईपल्ट उनले डेटामा बोलेका थिए, दुबैपटक गल्ती भएछ । नेपालमैं पहिलो केस भेटिएको दुई महिनापछि उनले पीपीई भनेको त भर्खर बुझे, अब स्वास्थ्य क्षेत्रका जटिलता र प्राविधिक समस्याबारे बिस्तारै बुझ्दै गर्लान् नै ।
र पनि हामी आजसम्म सुरक्षित छौं । मलाई चाहिँ पशुपतिनाथमाथि झन धेरै भरोसा थपिएको छ !
प्रकाशित: १४ चैत्र २०७६, शुक्रबार ०४:४६